Toerana manan-tantara any Amerika afovoany | Vaovao momba ny dia
Toerana manan-tantara any Amerika afovoany
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | America, kolontsaina
Vato vato Costa Rica
Ny ady sy ny ady notarihin'ny fanjakana, ny fifanandrinana nifanandrinana tany Azia sy Eropa, ary ny loza voajanahary sy ny loza voajanahary maro, azontsika atao ny manamafy fa iharan'ny amerikana afovoany tantara taloha. Ireto ny sasany amin'ireo tranonkala manan-tantara ambony izay tokony hanakatra ny làlan'ny mpandeha an-tongotra rehetra.
1 Costa Rica Spheres vato
2 Nohmul any Belize
3 Tikal any Goatemalà
4 Sisa tavela any Copan any Honduras
5 Sarivongan'i Howler Monkey any Copan, Honduras
6 Tazumal, Chalchuapa any El Salvador
7 Tempolin'ny sarontava ao Lamanai
8 Fikambanan'i Jesosy any Panama City
9 Lehiben'ny Olmec Colossal any Goatemalà
Costa Rica Spheres vato
Ho an'ny mponina, ireto faritra ireto dia Las Bolas, manana fiaviana miafina, ireo sehatra ireo dia an'ny kolotsaina Diquís, izay nisy tany Costa Rica nanomboka tamin'ny taona 700 tany ho any. Mandra-pahatongan'ny 1530 d. C. dia malaza be any Costa Rica, toerana misy azy ireo manerana ny firenena. Angano maro no manodidina ny sehatra, ohatra hoe avy any Atlantis izy ireo.
Nohmul any Belize
Tsy nahazo niditra tao Nohmul mihitsy ireo mpizahatany na dia hita tany amin'ny taona 900 taorian'i Kristy aza. Nohmul dia noravan'ny ekipa mpanao fanamboaran-dàlana. "Ny Institute of Archaeology dia manararaotra ity fotoana ity hanangana hetsika fanentanana ho an'ny firenena amin'ny fiarovana sy fiarovana ny firenena," hoy i John Morris, talen'ny fikarohana ao amin'ny Ivon-toerana Arkeolojia Belize.
Tikal any Goatemalà
UNESCO dia nanambara an'i Tikal ho lova iray maneran-tany, tranonkala arkeolojika sy ivon-tanàna an-tanàn-dehibe Maya nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX tal. C. Tikal dia manana tempoly, rafitra, sary sokitra, fasana sy sarivongana maro.
Sisa tavela any Copan any Honduras
Ho an'ireo tia ny maritrano Maya sy ny sary sokitra, ny Ruins Copán dia mpizaha tany malaza. Ny ampahany malaza indrindra aminy dia ny Hieroglyphic Staircase (jereo ny sary). Ao amin'ny faritry ny Ruinas de Copán Ruinas dia fanadihadiana maro no natao tany Amerika Afovoany.
Sarivongan'i Howler Monkey any Copan, Honduras
Ny gidro Howler dia biby malaza amin'ny kolotsaina Maya taloha, izay noheverina ho andriamanitra. Ity sarivongana Copan voatahiry tsara ity dia iray amin'ireo ohatra malaza indrindra. John Lloyd Stephens, mpikaroka amerikana, dia nanoritsoritra ireo primatiora ireo ho "maratra sy manetriketrika ary maratra ara-pihetseham-po, toy ny hoe mpiambina ny tany voatokana izy ireo."
Tazumal, Chalchuapa any El Salvador
Ny Tazumal dia midika hoe 'ny piramida (na toerana) nandoroana ireo niharam-boina' ary fonenan'ny sasany amin'ireo rava lehibe indrindra sy voatahiry tsara indrindra any Amerika Afovoany. Ny toerana nonina teto amin'ity toerana ity dia nanomboka tamin'ny taona 5000 talohan'i JK. Betsaka ny zavakanto hita tao Tazumal, anisan'izany ny sary vongana andriamanitra Nahuatl Xipe Totec.
Tempolin'ny sarontava ao Lamanai
Rakotra sarontava vato, ity tempoly Lamanaique Maya ity dia mizara fitoviana maro amin'ny sary famantarana ny kolontsaina Olmec. Ny rindrina iray hafa amin'ny Tempolin'ny Maska izay hitan'ny arkeology tamin'ny 2011 dia mampiseho endrika mitovy ihany koa, endri-javatra mahazatra amin'ny maritrano Maya.
Fikambanan'i Jesosy any Panama City
Ity tranobe ity dia nampiasaina ho sekolim-pinoana, fiangonana ary oniversite. Niorina tamin'ny 1741 izy io ary hadino taorian'ny hain-trano tamin'ny 1781 ary avy eo horohoron-tany tamin'ny 1882. Nanomboka tamin'ny 1983 ny asa famerenana amin'ny laoniny ary antenaina fa ho azon'ny besinimaro atsy ho atsy. Izay mpianatra fifanakalozana rehetra any Panama dia tokony hitsidika ity toerana ity.
Lehiben'ny Olmec Colossal any Goatemalà
Ireo loha tsy mampino ireo avy amin'ny kolontsaina Olmec an'ny Mesoamerica taloha dia nanomboka tamin'ny 900 talohan'i Kristy. C. Ny toerana misy ny fito ambin'ny folo amin'izy ireo dia fantatra. Ny ankamaroany dia any Mexico ankehitriny - any amin'ny fanjakan'i Tabasco sy Veracruz-, na dia any Amerika Afovoany aza ny loha iray, ao Takalik Abaj, Guatemala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Toerana manan-tantara any Amerika afovoany
Titan Crane, iray amin'ireo vano lehibe indrindra manerantany
Binibeca, ilay tanàna fotsy kely izay manjelanjelatra any Menorca